New iPad 2019 na Apple Watch Series 5 | Akụkọ akụrụngwa
Na mgbakwunye na iPhone 11, nke a bụ ihe niile Apple gosipụtara na isi okwu ikpeazụ
Ignacio Sala | | smartwatch, mbadamba
Nkeji ole na ole gara aga, isi okwu maka ngosi nke ọhụrụ iPhone 11 agwụla, ihe omume nke, dị ka ọ dị na mbụ elekwasị anya na ngwaahịa kachasị mkpa nke Apple, iPhone, ma ọ bụghị naanị, ebe ọ bụ na ọ gosipụtarala mmeghari ohuru nke iPad 2018 na Apple Watch Series 5.
Onye ibe m Miguel, egosila gị akụkọ niile sitere na nke iri na otu nke iPhonena nomenclature dicha oke ịkpọ, karịsịa ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ihe nlereanya ahụ nwere nnukwu ihuenyo kachasị, iPhone 11 Pro Max. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịma akụkọ fọdụrụnụ nke Apple webatara, a na m akpọku gị ka ị gụọ agụ.
1.1 Ọnụahịa IPad 2019, agba na nnweta
2.1 Ahịa nnweta na agba nke Apple Watch Series 5
Ọ bụ ezie na Apple agbakwunyeghị aha ọ bụla na ngwaọrụ a, ọ bụrụ na anyị chọrọ ọdịiche ya na ụdị ndị gara aga, anyị ga-agbakwunye tagline 2019. Ntinye iPad a, na-enye anyị dị ka isi ihe ngosi 10,2 nke anụ ọhịa ahụ, n'ụzọ dị otu a Apple mechara chefuo iPad nke 9,7 nke na-eso anyị kemgbe emechara ụdị iPad mbụ.
Dị ka iPad 2018, iPad 2019 ọ dakọtara na Apple Pencil, ọgbọ mbụ naanị. Na enweghị nke ịmara nkọwa na usoro nke RAM, Apple ahọrọla maka A10 Fusion processor, the otu nhazi ahụ anyị nwere ike ịchọta na iPad 2018.
Ihe ndi ozo banyere iPad a nke 10,2-inch, ha niile bụ otu na anyị nwere ike ịchọta n'ọgbọ gara aga, yabụ ọ bụrụ na ị zubere imegharị iPad gị 2018 ọ bụghị ezigbo echiche, belụsọ na ịchọrọ ị nweta 0,5 sentimita karịa.
Ọzọkwa, Na iOS 13, iPad na-arị ọtụtụ usoro Banyere arụmọrụ nke iPad na iOS 12 nyere anyị ruo ugbu a, ọ na-emepe ohere dị iche iche na-enweghị njedebe. Otu n'ime akwụkwọ akụkọ ọhụrụ nke iOS 13 na-enye anyị, ohere nke ijikọ draịva siri ike na eriri USB na ngwaọrụ iji nweta ma jikwaa ozi ahụ, jikọọ njikwa nke PlayStation 4 ma ọ bụ Xbox iji nwee ọ gamesụ egwuregwu kachasị amasị gị (n'ihi Apple Arcade). , na ọhụrụ multitasking, nke na-enye anyị mmegharị ọhụụ na ọrụ ndị na-eme ka iPad bụrụ ngbanwe o kwere omume maka laptọọpụ ka anyị ghọtara ya.
Ọnụahịa IPad 2019, agba na nnweta
IPad 2019 dị na agba atọ: oghere ntụ, ọlaọcha na ọla edo. Banyere ebe nchekwa, anyị na-ahụ nsụgharị abụọ: 32 GB maka euro 379 na 128 GB maka euro 479. Ọ bụrụ na anyị chọrọ nsụgharị ahụ na njikọta LTE, ọnụahịa nke ụdị 32 GB bụ 519 euro na 128 GB na-aga 619 euro.
Mgbe iwebata ECG n'afọ gara aga na Apple Watch Series 4, Apple nwere obere ụlọ maka mmelite na ọgbọ ọhụrụ a nke Apple Watch. Agbanyeghị, ọ laghachitere na-eju anyị anya na ngwaọrụ a maka nke ọhụrụ ngosipụta retina mgbe niile, a na ihuenyo na-egosi anyị mgbe niile na gburugburu na ihe niile na nsogbu na anyị ahazi.
Mgbe anyị gbanyere nkwojiaka anyị iji hụ ọkwa ma ọ bụ chọpụta oge ahụ, ihuenyo ahụ na-enwu naanị ka ọ ghara isiri anyị ike ịnweta ozi ọ na-egosi anyị. Dabere na Apple, ndụ batrị ka bụ otu karịa n'ọgbọ gara aga, yabụ anyị agaghị ata ahụhụ dị oke mkpa n'ihe metụtara obodo kwụụrụ ya na-enye anyị.
La compass wuru bụ ihe ọzọ nke akwụkwọ ọhụụ nke ọgbọ ise nke Apple Watch nyere, kompas nke na-etinyekwa akara ngosi dị elu ka anyị wee nwee ike ịchọta ụzọ anyị ga-esi laghachi ebe ọ bụla anyị nọ.
Ihe omuma ohuru nke na-adọta uche nke ọgbọ nke ise a dị na ihe ndị na-emepụta ihe. Apple Watch Series 5 dị na aluminom, igwe anaghị agba nchara, titanium na seramiiki. Aka na watchOS 6, Apple a, dị ka ụdị ndị gara aga kwekọrọ na sistemụ ọhụụ ọhụrụ nke sistemụ Apple Watch, anyị nwere mita decibel anyị ga-agwa anyị mgbe ụda gburugburu ebe anyị nwere ike itinye ndụ anyị ịnụ ahụ ike.
Ahịa nnweta na agba nke Apple Watch Series 5
Ọgbọ nke ise nke Apple Watch na-ejigide otu ọnụahịa dị ka ọgbọ gara aga, na-amalite na 449 euro maka ihe atụ 40-millimita na igbe aluminom ma rute 1.449 maka ihe nlereanya ahụ na seramiiki na 44 millimeters.
Apple Watch ji igbe aluminom na nke 4 millimeta: euro 449
Apple Watch nwere igbe aluminom na ikpe millimita 44: euro 479
Apple Watch ji igbe nchara na igbe millimita anọ: euro 4
Apple Watch ji igbe nchara na ikpe 44-millimita: euro 779
Apple Watch nwere ikpe titanium na nke 4 millimeta: euro 849
Apple Watch nwere ikpe titanium na ikpe 44-millimeta: euro 899
Apple Watch ji ikpe seramiiki na okwu 40-millimita: euro 1.399
Apple Watch ji ikpe seramiiki na okwu 44-millimita: euro 1.449
Apple ka eze enen ma price na ukara ntọhapụ ụbọchị nke Apple Arcade. Datebọchị ga-abụ Septemba 19 ma ga-akwụ ụgwọ ya na euro 4,99 kwa ọnwa. Kemgbe mmalite ya, anyị ga-enwe ihe karịrị egwuregwu 100, egwuregwu anyị nwere ike ibudata na ngwaọrụ anyị yana anyị ga-enwe ike igwu egwu na-enweghị njikọ intaneti na-adịgide adịgide.
Ọrụ ọhụrụ a Ọ dakọtara na iPad, iPad, iPod touch, Mac na Apple TV, ya mere anyị ga-enwe ike igwu egwuregwu kachasị amasị anyị na ngwaọrụ ọ bụla. Egwuregwu niile dị n'elu ikpo okwu a ha enweghị ịzụrụ ihe ọzọ ma ha anaghị egosi mgbasa ozi. Na mgbakwunye, ikpo okwu a dakọtara na N’ezinụlọ, ya mere site na ịdenye otu aha, ndị niile nọ n'ezinụlọ ga-enwe ike ịnụ ụtọ ọdịnaya niile dị.
Dị ka atụmatụ, Apple ekwuputala ụbọchị mmalite nke ọrụ vidio gụgharia, ọrụ akpọrọ Apple TV +, ọrụ na a ga - ewepụta na November 1 ma kwụọ ụgwọ ya na euro 4,99 kwa ọnwa. Ọnụahịa a gụnyere ịnweta ndị ezinụlọ niile ma nwee oge nnwale ụbọchị n'efu nke 7.
Ọ bụrụ na ị na-eche maka imegharị ochie gị iPhone, iPad, iPod touch Mac ma ọ bụ Apple TV, Apple na-enye gị otu afọ nke Apple TV + ọrụ. Iji nwee obi ụtọ ọdịnaya nke ọrụ vidiyo ọhụụ a ga-enye anyị, ọ dịghị mkpa ịga site na mgbanaka Apple, ebe ọ bụ na ngwa iji nweta ọdịnaya ya ga-adịkwa, malite na mgbụsị akwụkwọ, na igwe onyonyo na ndị na-egwu vidiyo. .
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » mbadamba » Na mgbakwunye na iPhone 11, nke a bụ ihe niile Apple gosipụtara na isi okwu ikpeazụ
GXT 540C Yula camo mbipụta site Trust Gaming: Egwuregwu egwuregwu kachasị dị na ahịa
Apple na-ebupụta iPhone 11 na iPhone 11 Pro: Ahịa, atesbọchị na Akụkụ